अबिरल वर्षा, बाढी र पहिरोले पाण्डवखानीमा पु-याएको क्षती तस्वीरमा हेरौँ ! – ebaglung.com
अबिरल वर्षा, बाढी र पहिरोले पाण्डवखानीमा पु-याएको क्षती तस्वीरमा हेरौँ !
२०७५ असार २०, बुधबार १५:३६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ असार २० । असारको दोश्रो साता परेको भीषण वर्षाले गल्कोट क्षेत्रमा निकै क्षती पुयायो । मध्यपहाडी लोकमार्ग होस् या ग्रामिण मोटरबाटो जहाँतहिँ बाढी पहिरोले छिया छिया बनायो । करोडौँको क्षती पुगेको गल्कोटबासीको भनाई छ । मल्म, हटिया, दुदिलाभाटी, नरेठाँटी, हरिचौर, पाण्डवखानी अन्य वडाहरुभन्दा बढी बाढी पहिरो प्रभावित वडाहरु हुन् ।
बाढी पहिरो प्रभावित केहि वडाहरुमा प्रजिअ बेदप्रसाद खरेल स्थानीय जनप्रतिनिधी, प्राविधिकहरु सहितको टोलीले निरीक्षण गरेको छ भने पछिल्लो समय गल्कोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरे नेतृत्वको टोलीले हरिचौर लगायतका बाढी पहिरो प्रभावित वडाको निरीक्षण गरेको छ ।
अविरल वर्षा र पहिरोबाट गल्कोट वडा नं १० पाण्डवखानी पनि अछुतो रहेन । खोलाहरुमा आएको बाढी र पहिरोले पाण्डवखानीमा अपुरणीय क्षती पुगेको छ । हालैको भीषण वर्षा र बाढी पहिरोले पाण्डवखानीमा पुराएको क्षती तपसीलका तस्वीरहरुले बताउछ ।